Shiinaha Factory silsiladda jumlada dhalada cadarka dhalada ah ee dhalada ah ee dhalada ah ee dhalada ah oo dhareysa 120ml Kingtone
Wershad silsilad jumlad ah oo dhalada cadarka dhalada ah oo dhasha ah oo dhan 120ml oo leh dabool khafiif ah oo khaas ah
Nooca wax lagu xidho: BAMBASHADA BAMBARKA
Lambarka Moodalka: 3842
Isticmaal: Dhalo Cadar ah
Midab: guduud mugdi ah
Dhalo Cadar ah
guduud mugdi ah
Customzied La aqbali karo
☆ Naqshadeynta naqshadeynta-buufin ganaax joogto ah, dillaac-caddeyn, qalin bir aluminium bir ah iyo dabool dabeed, caws caag ah oo heer-cunto ah, dhalo muraayad adag oo daahfuran oo faaruq ah, UV ilaalinta
Ujeeddo badan-Buufintani waxay ku habboon tahay cadarrada, saliidaha lagama maarmaanka ah, dhalooyinka lagu buufiyo timaha, nadiifiyeyaasha guryaha lagu sameeyo, dawooyinka jirka lagu buufiyo, waxyaabaha qurxoon ee dabiiciga ah, udugga, buufinta buufinta iyo wixii kale ee isku dar ah.
☆ Qalab aamin ah oo caafimaad leh oo ka samaysan waxyaabo tayo sare leh, taas oo macnaheedu yahay inaad si badbaado leh ugu adeegsan kartid qalab kasta oo lagu beddelayo. Udgoon, BPA-la'aan, hogaamin la'aan
La qaadan karo-aad ugu habboon safarka, ku habboon in lagu rido boorsadaada ama boorsadaada la isku qurxiyo. Dhalada buufin dhalada lagu buufiyo ee sanka lagu buuxiyo waxaa lagu qalabeeyaa dabool sifiican ula socda isla markaana si wax ku ool ah uga hortaga wixii dheecaan dareere ah.
Faahfaahinta Baakadaha ons Kaartoonada Dhoofinta ee caadiga ah, Baasto ama Sida ku cad shuruudaha macaamiisha.
Dekedda ： Shanghai / Qingdao / Lianyungang
Hore: 100ml tayo sare leh cadarka atomizer dhalada cadarka muraayadda leh daboolka buufin bamka
Xiga: Ku wareeji qoorta 100ml dhalada cadarka muraayadda madow ee ragga
100ml dhalo barafuun cadar 100ml oo tayo sare leh ...
Ku wareeji qoorta 100ml dhalo baraf cad oo muraayad wareegsan ...
Makarafoonka casaanka qurxinta qurxinta 100ml bot muraayadda ...